လိင်တူချစ်သူများအပေါ် မုန်းတီးသည့် အယူအဆ အစပျိုးခဲ့ပုံ သမိုင်းကြောင်း (အပိုင်း ၁) | Colors Rainbow
August 9, 2017 April 6, 2018 Admin Admin 1300 Views0Comments Nay Yaung Lin Khant	min read
လိင်တူချစ်သူများနှင့် ကမ္ဘာ့သမိုင်းအကြောင်း အထူးပြုလေ့လာသည့် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နီဘရာစကာ တက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခ လူဝစ်ခရွမ်တမ် (Louis Crompton) သည် သမိုင်းတစ်လျှောက် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးတွင် ပျံ့နှံ့တည်ရှိခဲ့သော လိင်တူဆက်ဆံသည့် အဖြစ်အပျက်များနှင့် ခေတ်အဆက်ဆက် လိင်တူချစ်သူများအပေါ် ထားရှိသည့် လူတို့၏ သဘောထားများကို လေ့လာပြီး Homosexuality and Civilization ဟူသည့် စာအုပ်ကို ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည်။
အဆိုပါစာအုပ်တွင် ယနေ့ခေတ် ကမ္ဘာတစ်လွှား တွင်ကျယ်စွာ ပျံ့နှံ့နေသော (Homophobia) ခေါ် လိင်တူ ချစ်သူများအား မုန်းတီးသည့် စိတ်ဓါတ်များ အစပျိုးစေခဲ့သည့် အရင်းအမြစ်ကို ရှာဖွေကာ သုံးသပ်ပြထားသည်။ ထိုသို့ လေ့လာရာတွင် ခရစ်တော်မပေါ်မီ ရာစုနှစ်များစွာက ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သော ဂျူးယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဂျူးဘာသာရေး အဆုံးအမများသည် ယနေ့ခေတ် လိင်တူချစ်သူများအပေါ်ထားရှိသည့် စိတ်သဘောထားများအပေါ် အလွန်မှပင် သက်ရောက်မှု ရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂ဝဝဝ ကျော်ခန့်က စတင်ခဲ့သည်ဟု ယူဆရသော ဂျူးလူမျိုးတို့၏ အစောပိုင်း သမိုင်းကြောင်း အဖြစ်အပျက်များသည် ဖြစ်ရပ်မှန်နှင့် ဒဏ္ဍာရီများ ရောယှက်နေပြီး ၄င်းတို့အကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာတွင်လည်း အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ ဂျူးလူမျိုးတို့သည် ၄င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံအဖြစ် ထူထောင်နိုင်ခြင်း မရှိသေးခင်က အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွင် လှည့်လည်သွားလာနေသော လူမျိုးစုတစ်စု ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၄င်းနောက် အီဂျစ်ဖာရိုဘုရင်၏ လက်အောက်တွင် လူမျိုးစုတစုလုံး ကျွန်အဖြစ် ကျရောက်ခဲ့ကြပြီး တမန်တော် မိုဇက် (Moses) ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ကျွန်ဘဝမှ လွတ်မြောက်ရန် အီဂျစ်ပြည်မှ ထွက်ခွာလာခဲ့ကြရာ ပင်လယ်နီသို့ အရောက်တွင် နောက်မှ လိုက်လာသော ဖာရိုဘုရင်နှင့် စစ်သည်များက နီးကပ်လာခဲ့သည်။ ရန်သူနှင့် ပင်လယ်ကြားတွင် ပိတ်မိနေစဉ် တမန်တော် မိုဇက်မှ ပင်လယ်နီကို နှစ်ခြမ်းကွဲစေပြီး တဖက်ကမ်းသို့ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ကာ ဖာရိုဘုရင်နှင့် စစ်သည်များ ရေနစ်သေဆုံးခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့နောက် Yahweh ခေါ် ထာဝရ ဘုရားရှင် ညွှန်ပြရာ မြေထဲပင်လယ် အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေရှိ ပါလက်စတိုင်းဒေသသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ဂျူဒါ (Judea) ခေါ် အစ္စရေးနိုင်ငံအဖြစ် ထူထောင်ကာ အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်ဟု ဂျူးတို့က ယုံကြည်ကြသည်။ အဆိုပါ ဇာတ်လမ်း အဖြစ်အပျက်တို့ကို ဂျူးတို့၏ ဘာသာရေးကျမ်းစာရှိ တိုရာ (Tora) တွင် အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားပြီး နောက်ပိုင်း ပေါ်ထွန်းလာသော ခရစ်ယာန်ဘာသာ သမ္မာကျမ်းစာတွင်ပါ အလားတူ ဖော်ပြထားသည်။ ကမ္ဘာအနှံ့သို့ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ပျံ့ပွားလာသည်နှင့်အမျှ အဆိုပါ ဂျူးဒဏ္ဍာရီများသည်လည်း ကမ္ဘာအနှံ့သို့ ပျံ့နှံ့ပြီး နှောင်းခေတ် လူတို့အကြားတွင် ပိုမိုတွင်ကျယ်စွာ သိရှိလာကြသည်။
အီဂျစ်ဖာရိုဘုရင်လက်မှ လွတ်မြောက်လာပြီးသည့်နောက် ထာဝရဘုရားသခင်မှ တမန်တော် မိုဇက်အား ဆိုင်းနိုင်းတောင်ထိပ်တွင် ပေးအပ်ခဲ့သည်။ (Ten Commandments) ပညတ်တော် ၁ဝ ပါးသည် ဂျူးဘာသာဝင်များနှင့် နောင်အခါ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်အားလုံးတို့အတွက် လိုက်နာစောင့်ထိန်းအပ်သော အကျင့်သီလ အုတ်မြစ်များ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
တမန်တော် မိုဇက်မှ ဟောကြားခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည့် တိုရာ (Tora) ဂျူးဘာသာရေး ကျမ်းစာတွင် Genesis၊ Exodus၊ Leviticus၊ Numbers နှင့် Deuteronomy ဟူသည့် အပိုင်းငါးပိုင်း စာအုပ်ငါးအုပ်ပါရှိပြီး ကာမဆက်ဆံခြင်း အပါအဝင် လူမှုရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော ဂျူးဘာသာရေး အဆုံးအမများကို Leviticus တွင် တွေ့ရသည်။
Five books of Tora
အဆိုပါ Leviticus ကျမ်းစာများတွင် ဂျူးဘာသာဝင်တို့သည် လူစိမ်း၊ ဆင်းရဲသား၊ မျက်စိမမြင်သူ၊ နားမကြားသူ၊ မိဘမဲ့များနှင့် မုဆိုးမများကို ညှာတာထောက်ထားရမည်။ လူယောကျ်ားနှင့် မိန်းမတို့သည် မိမိ၏ အိမ်နီးချင်းကို မိမိကိုယ်ကို ချစ်သကဲ့သို့ ချစ်နိုင်ရမည်ဟု ဆုံးမထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါ အိမ်နီးချင်းသည် လိင်တူချင်းဆက်ဆံသူ ဖြစ်နေပါက ၄င်းကို အိမ်နီးချင်းအဖြစ် မသတ်မှတ်ပဲ မိစ္ဆာကောင်အဖြစ် သတ်မှတ်ကာ သုတ်သင်ရှင်းလင်းသွားရမည်ဟု ဆိုထားသည်။
Leviticus ကျမ်းစာ၏ (Chapter 18) တွင် ဆွေမျိုးမောင်နှမများအကြား လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့် ယောကျ်ားချင်း လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ရှုံ့ချဖော်ပြထားသည်။
“Defile not ye yourselves with any of these things: for in all these the nations are defiled which I
cast out before you: And the Land is defiled: therefore I do visit the iniquity
thereof upon it, and the land vomiteth out her inhabitants” (Lev. 18:24).
ဂျူးလူမျိုးတို့မတိုင်မီ ပါလက်စတိုင်းဒေသတွင် နေထိုင်ခဲ့သော Canaanites လူမျိုးစုများသည် အဆိုပါ မဆီလျော်သော ကာမအမှုများကို ပြုကျင့်ခဲ့သဖြင့် ဤဒေသမှ ထွက်ခွာသွားကြရကြောင်း၊ ဂျူးတို့သည်လည်း အလားတူ ပြုမှုပါက ကံကြမ္မာဆိုးများ ကျရောက်ကာ ထွက်ခွာသွားရမည်ဟု သတိပေး ဆုံးမထားသည်။
၄င်းနောက် (Chapter 20) တွင် အဆိုပါ ယောက်ျားချင်း လိင်ဆက်ဆံသူများအား မည်သို့မည်ပုံ အပြစ်ပေးရမည် ဆိုသည်ကို အောက်ပါအတိုင်း ပြဌာန်း သတ်မှတ်ပေးထားသည်။
Ifaman also lie with mankind, as he lieth withawoman, both of them have committed an abomination: they shall surely be put to death; their blood shall be upon them. (Lev. 20:13)
“အကြင်ယောက်ျားသည် အခြားယောကျ်ားသားတဦးနှင့် မိန်းမသားနှင့် အတူနေသကဲ့သို့ နေထိုင်ဆက်ဆံပါက ၄င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် ရွံရှာစက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းသော အမှုကို ကျူးလွန်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့ကို သေချာစွာ သေဒဏ် ပေးသင့်သည်။ ၄င်းတို့သွေး မြေသို့ ကျစေသော်”
အဆိုပါ ကျမ်းစာပါပြဌားန်းချက်သည် ဂျူးနိုင်ငံ၏ အာဏာစက်အောက်တွင် ရှိသူများအတွက်သာ မဟုတ်ပဲ နောဧမှ ဆင်းသက်လာသူ အားလုံးအတွက် (လူသားအားလုံးအတွက်) ရည်ရွယ်သည်ဟု ဆိုသည်။
Leviticus ကျမ်းစာရှိ အဆိုပါ စာပုဒ်ငယ်လေးသည် စကားလုံး၂ဝ ကျော်သာ ပါဝင်သော်လည်း နောင်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာအောင် လိင်တူချင်း ချစ်သူတို့၏ ကံကြမ္မာကို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ထားခဲ့သည်။
စာရေးသူ Louis Crompton ၏ အဆိုအရ ဂျူးဘာသာသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ လူမျိုးစုငယ်ကလေးတစု ကိုးကွယ်သည့် သာသာအဖြစ်နှင့်သာဆိုပါက အဆိုပါ ကျမ်းစာသည် လိင်တူဆက်ဆံသူတို့အပေါ် များစွာသက်ရောက်မှု ရှိမည်မဟုတ်။ သို့ရာတွင် ဂျူးဘာသာတရားကို အခြေခံလျက် ကမ္ဘာတွင် လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံးဖြစ်လာမည့် ခရစ်ယာန် ဘာသာတရား ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ရာ အဆိုပါ လိင်တူချစ်သူ မုန်းတီးရေး အယူအဆများပါ လက်ဆင့်ကမ်း ပါဝင်လာခဲ့သည်။ ဂျူးတို့ လက်ခံယုံကြည်သော ရေယောဗာ ဘုရားသည် လူသားအားလုံးနှင့် ဆိုင်သော (God) ထာဝရ ဘုရားသခင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အညီ ဂျူးကျမ်းစာ အဆုံးအမ အများစုသည်လည်း ခရစ်ယာန်တို့ လိုက်နာအပ်သော ကျင့်ဝတ်များ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဂျူးကျမ်းစာမှ အချို့သော အကြောင်းအရာများဖြစ်သည့် အစားအသောက် စားသုံးပုံ၊ အဝတ်အထည် ဝတ်ဆင်ပုံ၊ သီးနှံစိုက်ပျိုးပုံ စသည့်စည်းမျဉ်းများ ခရစ်ယာန်သမ္မာကျမ်းစာတွင် မပါဝင်တော့သော်လည်း လိင်မှုကိစ္စနှင့် ဆိုင်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ အဆုံးအမများမှာမူ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း (Old Testament) တွင် အားလုံး ပြန်လည်ပါဝင်လာသည်။
မြတ်သော သမ္မာကျမ်းစာ (Holy Bible) ကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်း (Old Testament) နှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်း (New Testament) ဟု အဓိကနှစ်ပိုင်း ခွဲခြားထားသည်။ အကြမ်းအားဖြင့် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း (Old Testament) တွင် ထာဝရ ဘုရားမှ အနန္တလောက၊ ကမ္ဘာမြေနှင့် လူသားတို့ကို ဖန်ဆင်းခြင်းမှသည် ဂျူးလူမျိုးတို့ နိုင်ငံသစ် တည်ထောင်ကာ၊ တမန်တော် မိုဇက် ကွယ်လွန်သည်အထိ ပါဝင်သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်း (New Testament) တွင် Gospels ခေါ် ခရစ်တော်၏ ဘဝဇာတ်ကြောင်းနှင့် ဟောကြားချက်များ၊ Acts of Apostles ခေါ် ခရစ်တော်၏ နောက်လိုက်နောက်ပါ သူတော်စင်များ၏ ရေးသားချက်များနှင့် Apocalyplse ခေါ် ကမ္ဘာကြီး ပျက်သုဉ်းမည့်အကြောင်း သတိပေးချက်တို့ ပါဝင်သည်။ Old Testament သည် ဂျူးတို့၏ တိုရာ ဘာသာရေးကျမ်းစာများနှင့် အတူတူဖြစ်သည်။
အပိုင်း (၂) ဆက်လက်ဖတ်ရန်
← တတိယလိင်၏ သမိုင်းကြောင်းများကို လေ့လာခြင်း
လူမှုဗေဒ သဘောထားနှင့် LGBT →